Madax-dhaqameedka Awdal Oo Sida Fiinta Uga Qayliyay Go’aankii Xukuumaddu Ka Soo Saartay Goobaha Woqooyiga Hargaysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madax-dhaqameedka Awdal Oo Sida Fiinta Uga Qayliyay Go’aankii Xukuumaddu Ka Soo Saartay Goobaha Woqooyiga Hargaysa
Boorama (SDWO.com): Madax-dhaqameedka gobolka Awdal, ayaa si weyn uga qayliyay go’aankii ay dhawaan xukuumadda Somaliland ka soo saartay 6 goob codbixineed oo ku yaalla woqooyiga gobolka Maroodijeex oo uu muran ka taagan yahay.
Iyadoo ay xukuumadu Sabtidii todobaadkan sheegtay in dib looga qabanayo diiwaangelinta codbixiyeyaasha lixdaasi goobood ee uu muranku ka taagan yahay.
Hase yeeshee wixii ka danbeeyay markii ay xukuumadu soo saartay go’aamadda ku aadan goobahaasi ayaa waxaa isa-soo tarayay cabashooyin iyo hadalo xanaf leh oo ka soo yeedhayay cuqaasha, salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Awdal.
Waxaanay sheegeen madax-dhaqameedka Awdal in aanay marnaba aqbalaynin in lixdaasi goobood ay ka dhacdo diiwaangelintu, iyagoo dhinaca kale-na xukuumadda ku eedeeyay in ay colaad ka hurinayos degaankaasi.
Sidoo kale dadweynaha ku nool magaaladda Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa iyagna waxay maanta si cadho leh uga jawaabeen go’aankii ay xukuumadu ka soo saartay goobahaasi.
Kuwaasi oo si cad u sheegay in dawladu ay doonayso in ay beel kale siiso degaan ay beelaha Awdal leeyihiin.
Hadaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa hadalka bulshadda Boorama ee maanta: